बिहेकै दिन बेहुली छतबाट खसेर ढाड भाँ’चियो, बिहे गर्न आएका बेहुलाले अस्प,तालकै बेडमा सिन्दुर भरे - समृद्ध नेपाल
बेहुली आरती अस्पतालको खाट’मा सुतिरहेकी छिन् । नको हातमा मेहंदी लगाईएको छ । उनको छेउमा बसिर’हेको युवक उनका पति अव’धेश हुन् । जो उनकी पत्नीको रेख’देखमा छन्।वास्तवमा प्रतापगढको कुंडा क्षेत्रमा बस्ने आरतीको लागि विवा’हको तयारी पूरा भएको थियो र जन्ती आउँदै थिए । तर दिउँसो उनी आफ्नो तीन बर्षे भतिजालाई छतमा खेल्ने क्रममा ब’चाउन छतबाट ख’सिन् ।
दुर्घ’टनामा उनको ढाडको मेरुदण्ड भाँचिएको थियो र दुवै खुट्टामा पनि समस्या छ । घरका साथीहरूले उनलाई प्रयागराजको निजी अस्पता’लमा भर्ना गरे। जब दुलहा अवधेशलाई घटनाको बारेमा खबर गयो । घटनाको सत्यता र घटना पनि दुलहा अवधेशलाई दिइयो।आरतीको घरका मानिसहरूले अवधेशलाई आरतीको कान्छ बहिनीसँग बिहे गर्न भने तर अवधेशले निर्णय गरेका थिए कि आरती उसको जीवनसाथी बन्न सक्छ जे भए पनि जीवनभर उनलाई सहयोग गर्ने छ।
अवधेशले आफ्नो धार्मिक पत्नी आरतीको पूरा ध्यान राख्छन्। दुबैको साहस र साहसलाई सलाम गरेर नजिकका आ’फन्तहरू र परि’वारका सदस्य पनि खुसी भएका छन् ।उही समयमा, आरतीको परिवारले डाक्टरसँग कुरा गरेपछि उनलाई एम्बुलेन्सबाट कुंडा फिर्ता लगे र विवाह गरे । जहाँ अवधेशले ओछ्यानमा रहेकी आरतीलाई सिन्दुर लगाइदिए । त्यसपछि आरतीलाई प्रयागराजको यस अस्पतालमा भर्ना गरियो।
अवधेश र आरती अहिले निकै खु’सी छन् । समस्यामा छायाँले जस्तै एक अर्काको सहयोगी बनेकोमा । यस्तो अवस्थामा उनीहरू एक अर्का’लाई सहयोग गरेर व्यक्तिको लागि उदा’हरण बन्न पुगेका छन्। तिनीहरू वास्तवि’क जीवनको नायक भएका छन्। सबै’जनाले दुबैको यो निर्णयले उनीहरू’को प्रशंसा गर्दै छन्। एजेन्सी
जब थापाले सडकमै पर्खाल लगाए पछि भयो विवाद !
विवाहमा दुईवटा गाडी र १५ जना जन्ती लैजान पाइने !
महिनावरी हुँदा पेट देख्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? छुटराका पाउन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय !
भ्रमण वर्षको प्रचारमा जुट्यो साउदीका एनआरएनए !
फेरी सन्तोष देउजाले भारतमा पुगेर न्याय दिलाए (भिडियो हेर्नुहोस !
जिरो फिगर बनाउन खोज्दा २३ वर्षे युवतीको बेहाल !
पृथ्वी जयन्तीमा राप्रपाको चियापान : कमल थापाले प्रधानमन्त्रीलाई पर्खिरहे (फोटोफिचर)!
नायिका स्वस्तिमा खड्का साउथ इण्डियन फिल्ममा डेब्यू गर्दै !
एउटा छोरी बुवा आमाको खोसाखोस्, छोरीको पिआरका लागि बुवा आमाको तानातान !
नेपालमै भेटिइन् मोटर बनाउे महिला, कमाइ यति धेरै, मान्छे भए चकित !
सपना चौधरीको गीतमा नाच्दा नाच्दै १२ वर्षीया युवतीको मृत्यु !
भर्खरै विवाह गरेको यी नव जोडीलाई टिकटकमा किन खुबै उडाइरहेका छन मानिसहरुले !